नेपाल आज | अब तेस्रो जनआन्दोलन हुनुपर्छ (भिडियोसहित)
संविधानविद् एवम विश्लेषक दिनेश त्रिपाठी मुलुकको वर्तमान अवस्थाबाट वाक्क दिक्क छन् । मुलुकको बागडोर हातमा लिएको नेकपा र यसका नेताहरु देश र जनताप्रति रत्तिभर संवेदनशील नहुँदा मुलुक असफलतातर्फ जान लागेको उनको बुझाइ छ ।
त्रिपाठीका अनुसार नेकपाले राज्यका सम्पूर्ण निकाय कब्जा गरेर एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरेको छ । अहिले मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । भर्खरै महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सकिएको छ तर महिला हिंसा दैनिक बढिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार र अपराध संस्थागत हुँदै गएको छ । सत्तामा बसेकाहरु नै अपराधमा संलग्न छन् । वास्तवमा कारागारमा हुनुपर्नेहरु अहिले सिंहदरवारमा बसिरहेका छन् । यहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, विधि र प्रक्रियाको कुनै अर्थ छैन ।
नेपालका कम्युनिष्ट लोकतान्त्रिक आवरणमा अधिनायकवाद मन पराउँछन् । अहिलेको बामपन्थी सरकार पनि लोकतान्त्रिक आवरणको अधिनायकवादी सरकार हो । यो सरकारले एकपछि अर्को गरी ल्याइरहेका विधेयक संविधानको मूल्य मान्यता विपरित छन् ।
सुरक्षा परिषद्, मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, गुठीलगायत सबै विधेयकहरु संविधानको मर्म र भावना विपरित छन् । किन सरकार जनविरोधी ऐन कानुन बनाउन उद्धत छ ? अहिले फेरि जासुसी निकायलाई अदालतको अनुमति बिना नै व्यक्तिको कल रेकर्ड गर्न पाउने, म्यासेज लिन मिल्ने अधिकारसहितको ऐन बनाउने तयारी भइरहेको छ । यो त व्यक्तिको गोपनीयताको हकको ठाडो उल्लंघन हो । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो ।
यस्तो देखिएको छ नेकपा बाहेक कसैलाई पनि भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन । होइन भने नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेलमाथि वालुवाटार काण्डमा किन छानबिन हुँदैन ? लडाकु शिविरका नाममा भएको भ्रष्टाचारको फाइल किन खुल्दैन ? आफ्नालाई जतिसुकै अपराध गर्दा पनि संरक्षण गर्ने तर फरक विचारको छ भने निर्दोषलाई पनि फसाउने सरकारको चरित्र छ । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै जना यो चिन्तनबाट प्रभावित छन् ।
मुलुकमा नेकपाप्रति बफादार कार्यकर्ताबाहेक कसैलाई पनि ठाउँ छैन । उनीहरु सुरक्षित पनि छैनन् । एक किसिमले भन्ने हो भने मुलुकमा अघोषितरुपमा संकटकाल छ । सरकारबाटै जनता प्रताडित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नजस्ता आधारभूत विषयमै सबैभन्दा ठूलो लुट छ । यसमा आफूलाई कम्युनिष्ट हुँ भन्ने सत्तापक्षकै नेताहरु लागेको देखिन्छ । यो उकुुसमुुकुसबाट अब जनताले मुक्ति पाउनुपर्छ ।
गणितीय हिसाबमा यो सरकारसँग दुई तिहाइको जनमत भएपनि नैतिक हिसाबले पतन भइसकेको छ । यिनीहरु सबैले राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री अशक्त छन् । विरामी छन् । उनलाई देशमा के भइरहेको छ समेत थाहा छैन । यो अवस्थामा उनको नाममा देश कसले चलाउँदैछ ? प्रधानमन्त्री यसरी घेरिएका छन् कि उनलाई राजीनामा दिन समेत दिइरहेका छैनन् ।
‘चौतर्फी उकुसमुकुसको वातावरण भएकाले अब तेस्रो जनआन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । त्यही आन्दोलनबाट जनताका अधिकार स्थापित हुने, जनताको भावना बुझने सरकार बन्नुपर्छ । अहिलेको सरकारबाट केही पनि हुँदैन ।’ त्रिपाठी बताउँछन् ।